Gini bu Mondial Relay: Njirimara, Uru ya na otu esi eji ya | ECommerce ozi ọma
N'oge a, mbupu nke iwu ma ọ bụ ngwugwu, ma n'etiti mmadụ ma ọ bụ n'etiti ụlọ ọrụ na ndị mmadụ, dị. Ma ọ bụ na ntoputa nke azụmaahịa dị n'ịntanetị emeela ka eCommerce ọ bụla chọọ ọrụ ngwugwu iji nweta ngwaahịa ha na onye nnata. Yabụ, n'etiti ọtụtụ nhọrọ, Mondial Relay bụ otu n'ime ha.
Ma, You mara ihe Mondial Relay bụ? Taa, anyị na-ekwu maka ụlọ ọrụ a yana uru ya na otu esi esi eziga ya ngwugwu.
1 Gịnị bụ Mondial Relay
1.1 Kedu ihe bụ agba anọ nke Mondial Relay
1.2 Uru na uru nke iji Mondial Relay
2 Otu esi eziga ngwugwu na Mondial Relay
2.1 Tinye mbupu nkọwa
2.2 Point Pack ma ọ bụ zipu ụlọ
2.3 Nyochaa usoro
2.4 Bipụta akara ma were usoro ahụ
2.5 Ego ole ka ọ bara uru iji bupu Mondial Relay
Mondial Relay bụ ụlọ ọrụ ngwugwu. Ọ bụ ụlọ ọrụ nwere ike ịlele iziga nchịkọta n'etiti ndị mmadụ ma nwee ike ịnata ha n'ụlọ ma ọ bụ site na Point Packs.
Yabụ, anyị na-ezo aka na azụmahịa nke raara nye ibugharị ndị ahịa nye ndị nnata ha na mba ụfọdụ (ebe ọ pere mpe).
Kedu ihe bụ agba anọ nke Mondial Relay
Ihe bara uru bụ na Ngwunye Punto abughi ulo oru Mondial Relay ma ulo ahia dị ka ụlọ ahịa akwụkwọ, ndị na-ere ifuru, ndị na-ehicha ala ... ndị na-anata ngwugwu ma debe ya ruo mgbe onye nnata gawara ya. Yabụ, ịbụ ụlọ ahịa agbata obi, ndị mmadụ nwere ike ịmatakwu onwe ha ma zere ahịrị, na-eche, enwere mgbanwe dị ukwuu, wdg.
Uru na uru nke iji Mondial Relay
Ọ bụrụ na ị maghị, ebe nrụọrụ weebụ Mondial Relay gosipụtara uru na uru ị nwere ike irite site na iji ụlọ ọrụ ngwugwu a. N'ime ha, ndị anyị kachasị pụta ìhè bụ ndị a:
Sochie mbupu gị. Ọ ga - enyere gị aka ịkpọtụrụ usoro gị ebe ị ga - ama oge ọ bụla etu o siri dị ma ị ga - enwe ike ịgbaso ihu iji hụ ebe ọ na - aga na mgbe o ruru ebe ọ na - aga.
Ziga ngwugwu n'ụzọ dị mfe. Maka n'ezie iji zipu ngwugwu naanị usoro anọ dị mkpa (nke anyị ga-atụle n'okpuru). Mana ọ dị nfe na n ’anọ anọ ọ ga-adị ka abụọ. Na, n’oge niile, a ga-agwa gị usoro ndị mbupu gị ga-agafe.
Na-asọpụrụ ụwa. N'ihi njikwa ha na-ebu ngwugwu na omume niile ha setịpụrụ iji lekọta gburugburu ebe obibi. N'iburu n'uche na e nwere ihe karịrị 11.000 Relais Points na Benelux, France na Spain na n'ime ha niile ha na-elekọta gburugburu ebe obibi na mbara ala, ọ ga - enyere aka izere oke mmetọ.
Mana ugbu a, ka anyị gaa n’isiokwu nwere ike ị masịrị gị, kedu ka esi eziga ngwungwu na Mondial Relay na, karịa ihe niile, uru ole ọ bara? Ọfọn, na-aga n'ihu n'otu ibe ahụ, ha na-agwa anyị na izipu ngwugwu dị mfe nke na enwere ike ịme ya na usoro anọ.
Tinye mbupu nkọwa
N'okwu a, ị ga- emerịrị mara ibu na nha nke mbupu ịchọrọ ịhazi, na adres nke onye ga-enweta ya. Maka na ịchọrọ ya? N'ihi na ọ ga-abụ data na-ekpebi ihe ọnụego ga-etinye n'oge ahụ, ebe ọ bụ na ha nwere ya akpaghị aka.
Ozugbo enyere data ndị a, ha ga-ajụ gị ka ịhọrọ mkpuchi na ọkwa nke ụgwọ ịchọrọ. Kpachara anya, n'ihi na dabere na data a, ha nwere ike ịrịọ gị ka ị nweta ego karịa ma ọ bụ obere iweghara ngwugwu gị.
Point Pack ma ọ bụ zipu ụlọ
Ugbu a, ịchọrọ Họrọ Pack Point ebe onye ga-anata ngwugwu ga-eburu ya. Ọ bụrụ na ịmaghị nke nwere ike ịka mma, ihe ha na-enye gị ka ị zigara onye ọrụ ozi email ka onye nnata ahụ n'onwe ya họrọ ebe ahụ (n'ụzọ ahụ ọ bara uru karị n'ihi na ọ ga-abụ onye ahụ ga-ekpebi dabere n'ihe Ọ kaara gị mma, ma ọ bụ site n’ịdị nso n’ụlọ, ọrụ, wdg.
Enwere nhọrọ ọzọ, nke ahụ bụkwa zipu ulo, na-eburu n'uche na, na nke a, adreesị ahụ ga-ezu oke dị ka o kwere mee.
N'ikpeazụ, naanị ị ga-emezi iwu ahụ, hụ na ihe niile ziri ezi ma kwụọ ụgwọ maka mbupu a ka ọ gaa. Kwụ ụgwọ nwere ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị akụ (MasterCard, Visa), site na Paypal ma ọ bụ ọbụna site na Mondial Relay kaadị (kaadị nke ị na-etinye ego na ọ na-eje ozi dị ka akpa eletrọniki iji kwụọ ụgwọ maka mbupu ya na ha).
Bipụta akara ma were usoro ahụ
Ozugbo ịkwụ ụgwọ ahụ, ha na-ezitere gị akara na email gị na ị ga-ebipụta na mado na ngwugwu gị iji nwee ike izigara onye nnata ahụ. Ugbu a, ị ga-amararịrị na ha agaghị eburu iwu ahụ, mana ị ga-ewere ya na Pack Point ka ha nwee ike hazie ya.
Ego ole ka ọ bara uru iji bupu Mondial Relay
Ugbu a, ọ bụ ezie na usoro a dị mfe, n'ezie ihe kachasị amasị gị bụ ịmata ihe ọnụego ya bụ Mondial Relay na-emetụta izipu ngwugwu. Ọfọn, anyị ga-agwa gị na nke a ga-adabere n'ọtụtụ ihe:
N'otu aka, site na ịtụ ibu. Otu ngwugwu dị otu kilogram abụghị nke dị kilogram 30, ebe ọnụahịa na-abawanye.
N'aka nke ọzọ, ebe onye nnata ga-enweta ya. Dịka ọmụmaatụ, a na-ebo ya ebubo karịa ma ọ bụrụ na ọ bụ nnyefe ụlọ karịa nke dị na Punto Pack.
Na weebụsaịtị ị nwere tebụl nke ọnụego ya dị ka mbupu ahụ ka doo anya. Ọ na-emetụta ma ọ bụ Spain ma ọ bụ France, Belgium ma ọ bụ Luxembourg, ebe ọnụahịa na-abawanye n'ihu na ha na-aga. Ọ pụtara na naanị ị na-ebuga ebe ndị ahụ?
Ugbu a ha nwere naanị ụgbọ mmiri na France, Netherlands, Belgium, Germany, Portugal na Luxembourg (nke ga-abụ Mpaghara 1); ma ọ bụ Austria (gụnyere mpaghara 2).
Na mgbakwunye, ị nwere mkpuchi maka ngwugwu gị ka o wee rute nke ọma. Mgbe ị na-ego mbupu, ị na-ebuworị mkpuchi mkpuchi 25 euro (ọ bụrụ na ọ furu efu ma ọ bụ gbajiri, ha na-enye gị ndepụta ego na euro 25 ndị ​​ahụ). Mana, ọ bụrụ na ịchọrọ mkpuchi dị elu, ị nwere ọtụtụ ọkwa (1 ruo 5) nke nwere mkpuchi mkpuchi dị iche ị ga-akwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Gịnị bụ Mondial Relay
Ọrụ ọjọọ site na Mondial relay
Buyzụta ngwaahịa na ntanetị na Jenụwarị 5, 2021, na ọrụ nnyefe ahụ bụ nke a na-eme site na mondial relay, ị ga-ahọrọ ebe nchịkọta ngwugwu maka ngwugwu gị nke kachasị nso ma dị mma maka ị bulie.
Ọfọn, ebe nchịkọta ahụ adịghị adị ma ha zighachiri ya n'ụlọ nkwakọba ihe ahụ, ha ekenye m ebe ọzọ dị nso, ha dị mma maka ha, ha anaghị emelite ihe mkpọ ahụ, ma ị banye aghụghọ na-anakọta ngwungwu gị, ụbọchị iri na anọ nke mere na nzụta gị rutere gị, gbakwunyere mmefu nke njem na ihe ndị ọzọ iji mefuo oge gị yana na akwụgoro m ezigbo ụgwọ maka ọrụ njem. Oge mbụ na oge ikpeazụ na ụlọ ọrụ a!
M na-eso ha ebuga m mgbe niile. M na-ahapụ ya n'akụkụ n'akụkụ ụlọ m na ha na-abata na 3/4 ụbọchị. Na mgbakwunye, ọnụahịa dị oke ọnụ ala maka ọrụ niile ha na-eweta. Maka m, 10!
Ezitere m ngwugwu maka nchịkọta na Ghent. Mgbe ị na-eburu ngwugwu ahụ, a na-agbaji ya ma mebie ya.
Ịchọghị ime ka onye na-ebuga ya ghọta. Ọ sị na ya anaghị asụ bekee.
M na-ekwu na azịza ya bụ na ngwugwu ahụ ejighị n'aka nke ọma iji zere izu ohi
Ụlọ ọrụ na-ebufe njem kwesịrị ichekwa ngwugwu ahụ ka ọ bịarute n'ọnọdụ zuru oke na ebe a na-anakọta. Ha na-ahụ maka ngwugwu ahụ.
M mere mkpuchi maka ndị agadi, ha na-enye gị mba na amaghị m ihe
Ọrụ na-asọ oyi na enweghị ọrụ
Zaghachi M Sonsoles Maroto
Ọrụ dị egwu, ọ na-ewe ogologo oge ịbịarute karịa ka ha na-agwa gị, n'agbanyeghị na enwere nsochi ngwugwu, ị maghị ebe ọ na-aga.
Ngwunye ahụ rutere gbawara agbawa, mebie ya, na n'elu nke ahụ mgbe ha na-ekwu na ha na-agwa m na "nkwakọ ngwaahịa ahụ ezughị ezu iji gbochie izu ohi" dị ka ọ dị, n'elu na m mere mkpuchi maka ndị agadi na ha na-enye gị maka nke a.
Otu ngafe, agaghị m ezipu ngwugwu site na ụlọ ọrụ a ọzọ.
Ha nwere ọrụ ichekwa ngwugwu ahụ ka ọ bịarute n'otu ọnọdụ ahụ ị zigara ya.
JOAN CARLES bụ VICEDO dijo
Anyị zigara ngwugwu na 14-10-21 na Porto si Alicante (Spain) (58247095). Nke a kwesịrị ịbata Porto n'ime ụbọchị 3-4 mana mgbe ụbọchị iri na anọ gachara, mgbe ha kwusịrị ọtụtụ ugboro, ha gwara anyị na eweghachila ngwugwu ahụ ihe karịrị centimita ole na ole. Taa, ụbọchị 14 ka e mesịrị na mgbe anyị gafeworo France na Belgium, anyị enwetabeghị ngwugwu ahụ. Ọ dịghị onye na-enye anyị nkọwa doro anya. Naanị ha maara ka esi ekwu na a na-azọrọ ngwugwu ahụ. Email ọrụ azụmahịa anaghị aza ozi-e m zigara ha. N'ime o nwere igwefoto reflex, oghere ... wdg bara uru karịa 40 euro. Ha na-agwa m na ụlọ ọrụ ahụ nwere mkpuchi nke ha ga-akwụ m euro 1.500. Kedu ka okwu nzuzu siri sie ike?
Zaghachi JOAN CARLES ESTAN VICEDO
Ụnyaahụ m chọrọ ịnakọta ire friza na ọ dịghị ụzọ ha ga-esi tinye ego na ụlọ akụ, dị ka o kwere omume na otú ọ dị mfe iji kwụọ ụgwọ na bank transfer ma ọ bụ bizum, ọ bụghị ihe a pụrụ ịdabere na ha na-arịọ gị. kaadị kredit na ngọpụ nke nwere gị na ha website.